नेयमार बिहिबार स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध हुने विश्वकपको पहिलो खेलमा टोलीमा रहने पनि टिटेले पक्का गरेका छन् । ‘केन्द्रिकृत र प्रतिस्पर्धात्मक खेल हाम्रो लक्ष्य हो,’ प्रशिक्षक टिटेले भने,‘ अस्ट्रियाविरुद्धको खेल अर्को एउटा उदाहरण हो , मानसिक रुपमा पनि हामी परिपक्क हुँदै गएका छौं । फिजिकल्ली कन्ट्याक खेल भएकाले यो साच्चै कठिन खेल थियो । तर पनि हामीले राम्रो गर्यौं ।’
प्रकाशित : सोमबार, जेठ २८, २०७५१७:०१
युइएफएको उत्कृष्ट गोल उपाधिमा रोनाल्डोको दावेदारी !
लौ न टोलभरीका बच्चाहरू रोएर सुत्नै सकिएन ! आज ब्राजिललेको पालामा के हुने हो कुन्नि ?
ब्ल्याकपुल माथि आर्सनलको सहज जित !
हिगुआइन चेल्सीमा अनुबन्धित, टोटेनहमविरुद्ध खेल्न नपाउने
नेपालले जित्यो टस, ऐतिहासिक खेलमा नेपाल फिल्डिङ गर्दै !